Ndenye Guide: Olee otú Iji Travel Cinque Terre Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Ndenye Guide: Olee otú Iji Travel Cinque Terre Site Train
Italy bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu njem nleta ebe n'ụwa. People enubata mba mma nri, omenala, na ọgaranya akụkọ ihe mere. N'ezie, ị na-adịghị ọbụna nwere ileta ibu obodo na-enweta na-emere ọtụmọkpọ nke Italy. A ezi ihe nlereanya bụ nke a bụ na-adọrọ adọrọ gbatia nke onye Italian Riviera mara dị ka Cinque Terre. Ọ bụ a na-ewu ewu na-aga n'ihi na ndị mmadụ na-achọ na-enweta Mediterranean coastline na iwepu si nrụgide ijeụkwụ nke oge a ndụ. Ezie na e nwere ọtụtụ dịpụrụ adịpụ obodo na obodo nta na nsotu nile nke Italy, obodo nke Cinque Terre bụ nnọọ ihe kasị ewu ewu. N'ihi na mmasị a egwu ebe, Save A Train ewebatala ụzọ ngwa ngwa maka otu esi ahụ Cinque Terre site Train.
Mere Go Site Train?
Ọtụtụ ndị njem na-adịghị gara Cinque Terre nwere ike ịjụ ihe mere a ụgbọ okporo ígwè bụ ihe kasị mma nhọrọ. Ịkwụ ụgwọ ụlọ na ụgbọala na ụgbọala na nke a udo region ada mma, nri? Njọ. Iji ghọta ihe mere na ọ gaghị ekwe omume, ọ dị oké mkpa iji mara ihe na-eme ka elu Cinque Terre. Cinque Terre bụ isi mejupụtara ise azu obodo nta, n'ihi ya aha (ise ala). Ndị a na obodo nta na- Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, na Monterosso al Mare. Ha bụ ndị mbụ ise castles na obere obodo ndị gbara ha gburugburu. na-adị ndụ, ndị a na obodo nta wee akụkụ ke n'ịkụ azụ na iko ugbo. The obodo ntà ha, ruo mgbe na-adịbeghị anya, ejikọrọ na hiking ụzọ na ọ bụ nanị inweta site okporo ígwè ma ọ bụ oké osimiri.
Ndị a na obodo nta na-aba na-akpa iche dị ka ha na afọ gara aga. Otú ọ dị, ha ka na-anọgide na-enwe ime mmetụta na ọtụtụ ndị ụtọ. Roads na-eduga ụfọdụ nke obodo nta ugbu a, ma ha dị nnọọ warara, na pụrụ ịbụ a dị ize ndụ na njem ndị bụ ndị ọhụrụ n'okporo ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-eru obodo ntà site ụgbọ ala, ị ga-enwe ike ịga n'etiti ha site ụgbọ ala. Iji zere ihe ọ bụla ihe ize ndụ na mgbaka, ọ kasị mma gaa na obodo nta na ndị kasị adaba usoro nke iga ụgbọ oloko.
Gịnị Ka Ị Pụrụ Ịtụ Anya Site The Cinque Terre Train Line?
The Cinque Terre ụgbọ okporo ígwè akara nwere isii akwụsị. Iji nke a akwụsị bụ La Spezia (Central njem ehiwe na ebe), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, na mgbe akpatre Levanto. Ndị a njem ndị dịtụ obere na-adịghị-na oge. The njem site La Spezia ka Riomaggiore ewe ihe 10 nkeji. The njem n'etiti Cinque Terre obodo bụ banyere 5 nkeji na onye ọ bụla. Ndị a ụgbọ oloko na-aga site ọchịchịrị tunnels na ụbọchị azụ ka 1870s. Ọ bụ ihe na-akpali akpali na ahụmahụ nke na-aga site ọchịchịrị na mgbe ahụ na mberede ịhụ ihie na pụtara echiche nke Osimiri Mediterenian.
Ndị a ụgbọ oloko na-adịghị dị ka ugboro ugboro dị ka onye ga na-atụ anya nyere obere anya n'etiti ebe. Ha na-emekarị na-agba ọsọ ozugbo ọ bụla hour, ma nke a nwere ike ịdị iche iche site n'oge ruo n'oge. Otú ọ dị, ọ bụ mgbe niile kasị mma na-ajụ maka ozi ndị ọzọ mgbe ịzụta gị tiketi. Ke adianade ịmara oge na njem oge nke a ụgbọ okporo ụzọ, ọ dị oké mkpa iji emere ebere gị tiketi. E nwere nkwado igwe na ụgbọ okporo ígwè nyiwe na i nwere ike iji. All ị ga-eme na-slide warara njedebe nke tiketi n'ime oghere nke obere odo igwe na-eche ịnụ stampụ.
1. Ndenye Guide To Cinque Terre Site Train: Riomaggiore
Riomaggiore ga-ma na-akpa na-akwụsị (ma ọ bụrụ na ị na-aga site na La Spezia) ma ọ bụ nke ise stop (ma ọ bụrụ na ị na-aga site Levanto). Otú ọ dị, ọ na-yikarịrị na-aga na-akpa na-akwụsị maka ọtụtụ Cinque Terre ọbịa, ebe ọ bụ ihe ndị kasị ụzọ na-e. Riomaggiore bụ nnukwu nke ise na obodo ntà, na na ọ bụ unofficial isi obodo ebe isi park ụlọ ọrụ bụ e. The ụlọ na-n'elu ugwu niile n'elu nkpoda ndagwurugwu, n'ụzọ nile obere ọdụ ụgbọ mmiri. The idaha ekpepụsị pastel ụlọ bụ ọmarịcha na ga-ebi na ebe nchekwa gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ a mma ịhụ mgbe anyanwụ dara, na ọ bụ a ga-ahụ maka di na nwunye na-achọ ịkọrọ a oge pụrụ iche.
La Spezia ka Riomaggiore Ụgbọ oloko
Florence na Riomaggiore Ụgbọ oloko
Modena ka Riomaggiore Ụgbọ oloko
Livorno ka Riomaggiore Ụgbọ oloko
Manarola bụ a Petit obodo ahụ na-egosi na Nchoputa rida na Cinque Terre coastline na mbụ n'anya. Nro nke cascading yi ụlọ bụ a mara mma n'anya. Ọ bụ a zuru okè ngwakọta nke Italian omenala na jupụtara na nkume agwa. Ozugbo ị na-na ọmarịcha na-ele, ị nwere ike inyocha obodo. Manarola nwere a obere ọdụ ụgbọ mmiri nke na-egosi a ụgbọ mmiri ramp na a igwu oghere. ọ bụ zuru okè n'ebe na-a igwu mmiri na-eme ụfọdụ n'elu ugwu mmiri. Soro ọdụ ụgbọ mmiri na-ọtụtụ azu ụgbọ mmiri na-aghọ nke onye bi na Manarola. Ọdịnala akụta na-eri azụ bụ ka ndụ na-etokwa eto n'ime obodo.
La Spezia ka Manarola Ụgbọ oloko
Riomaggiore ka Manarola Ụgbọ oloko
Sarzana ka Manarola Ụgbọ oloko
Levanto ka Manarola Ụgbọ oloko
3. Ndenye Guide To Cinque Terre Site Train: Corniglia
Nke ọ bụla n'ime obodo ise ahụ nwere otu amara. Corniglia bụ pụrụ iche ebe ọ bụ na-na waterfront. Otú ọ dị, ihe ọ kọrọ na osimiri, ya karịa eme ka elu maka na ya pụrụ iche mara mma. Corniglia nwere mmetụta dịpụrụ adịpụ karịa anya obodo ozo. Otú ọ dị, ọ na-enye a ọzọ kwuziri, obodo ikuku. Obodo a na-eleghara anya maka ya agwụ ike ụzọ ụkwụ. N'adịghị ka ndị ọzọ na obodo nta na ike ga-ruru site ụgbọ mmiri, Corniglia bụ n'elu ugwu nta na ọ dịghị oké osimiri ohere. Nanị ụzọ iru ọ bụ soro bulie onu na Cinque Terre ụzọ ma ọ bụ na na-ụgbọ okporo. Otú ọ dị, ọ dị oké mkpa iburu n'obi na ụgbọ okporo ígwè agaghị zọọ unu ọ bụla anụ ahụ mgbalị. Ọ ga-adị gị mkpa ịga ije na steepụ iji ruo n'etiti obodo ma hụ ihe niile obodo nta na-enye.
Corniglia nwere a echiche dị egwu nke ahụ na-eme ka ị hụ ọtụtụ ugwu na gburugburu oké osimiri. The Belvedere n'ime obodo bụ a akwa ebe na-aga ma na-na ịma mma nke Cinque Terre. Ozugbo ị na-eme na i nwere ike na-enweta flavors obodo na-enye, si ịtụnanya pesto na-atọ ụtọ wine. Corniglia nwere a ọgaranya akụkọ ihe mere nke na-eme ka mmanya, na ọ bụrụ na ị kechioma enyi ndị obodo, ị pụrụ nụrụ ụtọ na-amụta banyere ha mmanya.
La Spezia ka Corniglia Ụgbọ oloko
Florence na Corniglia Ụgbọ oloko
Manarola ka Corniglia Ụgbọ oloko
Levant ka Corniglia Ụgbọ oloko
Vernazza a na-ewere dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mma obodo nta dị bụghị naanị Cinque Terre, ma mba ahụ dum nke Italy. Ọ bụ n'ezie ndị okpu ọla nke Cinque Terre na-eme ka ọtụtụ ọdịda na ịhụnanya na njem. Ọ nwere a ọzọ mara na omenala obi na-adị na n'obodo ndị ọzọ na-enweghị. Ikpokọta na na ahụkebe nri na ebube nlegharị anya, na ị na-a ebe emesi a abụọ nleta. Jide n'aka na ileta Doria nnukwu ụlọ mgbe na Vernazza. O nwere otu nke ikpeazụ mbụ elu na-echebe ndị obodo iri afọ gara aga.
Corniglia ka Vernazza Ụgbọ oloko
Florence na Vernazza Ụgbọ oloko
Bologna ka Vernazza Ụgbọ oloko
Riomaggiore ka Vernazza Ụgbọ oloko
5. Ndenye Guide To Cinque Terre Site Train: Monterosso Al Mare
Monterosso al Mare bụ doro anya na ọtụtụ touristy na-eme dị ka obodo dị na Cinque Terre. Ọ nwere ụgbọala, hotels na obere okwute osimiri zuru okè n'ihi na ndị njem nleta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ileta a dị ịtụnanya akụkụ nke Italy, ma na-ahọrọ karịa oge a vibe, mgbe Monterosso bụ maka gị. Monterosso nwere a na-eme mkpagharị na bụ zuru okè n'ihi na mgbede okoro nọ na-, na ọbụna mma, ha nwere ezi iri ga-eme ka onye ọ bụla na-enwe Erimeri.
Ka i si hụ, Cinque Terre nwere ọtụtụ ihe na-enye ndị ọbịa na chọrọ na-enweta a pụrụ iche Italian ahụmahụ. Ọ nwere ise pụrụ iche na obodo nta na-ekwe nkwa agaghị echefu ahụmahụ. Book A Ticket gị Train ma kwe ka gi nweta ahuhu di iche na nke ozo.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ndenye Guide: Olee otú Iji Travel Cinque Terre Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
cinqueterre europetrains europetravel eurotrip trainjourney Tranride ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelitaly